dad badan ayaa doortay in la yareeyo raadkooda kaarboonka ay duulaysa yar ama by jarida baxay safarka diyaaradda si buuxda u, inta badan jawaab u buzzword Sweden duulimaadyada ceeb (ceeb duulimaadka). Maaha wax qarsoodi ah in safarka diyaaraduhu hadda yahay mid ka mid ah kuwa sida ugu dhakhsaha badan u soo kordhaya wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Inkasta oo duulaya mar walba noqon doonaa ciyaaryahan muhim in sida aan u doortaan in ay safarka, waxaan u baahan nahay in la is xasuusiyo in noocyada kale ee u safraya dalab cajiib ah fasaxyada bey'ada.
Taageerida dadka deegaanka ma aha oo kaliya an bey'ada saaxiibtinimo safarka initiative laakiin sidoo kale waa qayb qaateen upliftment bulshada. Gadashada degaanka ka dhigan tahay in qofna lahaa inuu qaado alaabta kuwa. xitaa more, ganacsiyada maxaliga ah waxay leeyihiin fursad ay ku baraaraan. Waa yaraynta raadadka kaarboonka iyo ku guuleysiga bulshada maxalliga ah.
Hab kale oo aad qayb ka ciyaaro safarka waarta waa in ay leeyihiin eegno kit safarka. Xirmada An safarka bey'ada saaxiibtinimo ka koobnaan doonaan suurto gal ah caday baasaboorka a, baararka shaambo, iyo saabuun baalasho halkii aad ka marin lahayd jellada qubeyska. Shaambooyin yaryar iyo qaboojiyeyaal iyo tumblers-aan caddeyn-karin. Aluminum water bottles are vital as well as metal straw.